အိုင်တီသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကွန်ပျူတာအခြေခံကို ဘယ်လိုလေ့လာသင့်သလဲ ? - Active IT
ဟိုတနေ့ က ညီတစ်ယောက် လာမေးထားပြီး တခြားလူတွေလည်း မေးလေ့ရှိလို့ပါ.. အိုင်တီသမားအဖြစ် အသက်မွေးမယ်ဆို အခြေခံအဆင့်မှာ ဘာတွေကိုလေ့လာသင့်သလဲဆိုတာ.. ကျွန်တော့်အမြင်အရ အိုင်တီ သမားအဖြစ် အသက်မွေးမှရယ်မဟုတ်ဘူး ကိုယ်က နေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်မျိုး (Graphic Designer, Visual Designer, Video Editing) စတာမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုလည်း အောက်က ဟာတွေကို လေ့လာထားသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်…
ကွန်ပျူတာနဲ့ နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်မယ့် လူတစ်ယောက်အဖို့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ ပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်… Professional ဖြစ်လာပြီဆို စက်ဟာ ကိုယ် လုပ်မယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ဟာမျိုးကို ကိုယ့်ဘာသာရွေးချယ်တက်ဖို့ လိုပါတယ်. မဟုတ်ရင် အကြမ်းစီးဖို့ကို ကတ္တီပါ ဖိနပ်ဝယ်မိတာလိုမျိုးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်…
ဥပမာ Programmer တစ်‌ယောက် သုံးမယ့်စက်ဟာ အနည်းဆုံး SSD, 8GB RAM နဲ့ i5 CPU လောက်ရှိမှ သင့်တော်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ Programmer တစ်ယောက်သုံးမယ့်စက်မှာ Graphic Card မရှိလို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.. ရှိတော့လည်း ဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်ပေါ့… Graphic Card ကိုသုံးပြီး AI တွေရေးတဲ့ အလုပ်မျိုးကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့
ကွန်ပျူတာတွေမှာ Operating System တွေဟာလူတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် လူရဲ့ အဓိက ဦး‌နှောက်နဲ့တူပြီး စိတ်မမှန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ပညာတွေဘယ်လောက်တက်တက် အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်သလို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာလည်း ကိုယ်က ကောင်းကောင်းမထိန်းသိမ်းတက်လို့ OS မှာ Virus တွေကိုက်မယ်.. Error တွေတက်နေမယ်ဆို အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာအနည်းနဲ့ အများဆိုသလို စိတ်အ‌နှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်..
ဒါ့ကြောင့်ကိုယ်က ကွန်ပျူတာသုံးပြီး ပုံပဲဆွဲဆွဲ ပရိုဂရမ်တွေပဲရေးရေး စားရင်းပဲတွက်တွက် နေ့တိုင်း မဖြစ်မနေ အသုံးပြုနေရမယ့် OS ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကောင်းကောင်းသုံးတက်သင့်ပါတယ်..
အခုလက်ရှိ ကွန်ပျူတာတွေမှာ အသုံးအများဆုံး OS က Windows ဖြစ်ပြီး တခြားဟာတွေကတော့ Linux, MacOS စတာတွေဖြစ်ပါတယ်..
ခုခေတ်မှာလူတိုင်းနီးပါး အင်တာနက် သုံးနေကြပေမဲ့ သုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အင်တာနက် ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးမချတက်ပါဘူး.. များသောအားဖြင့် အိုင်တီသမားတွေကို ဆရာတင်ပြီး မေးနေရတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ဟာ Google လောက်ကို ဖြောင့်အောင် သုံးတက်မယ်ဆို ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ..
Networking ဆိုလို့ Subnet Mask တွေပေး DNS တွေ Configure လုပ်စတဲ့အဆင့်လောက်အထိ လုပ်တက်ဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်စက်ကို အင်တာနက်နဲ့ ဘယ်လို ချိတ်လို့ရမယ်..ကိုယ့်ဖုန်းက အင်တာနက်ကို ကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုယူသုံးမယ်.. အနီးနားမှာရှိတဲ့ စက်တွေနဲ့ File တွေ Share ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ကိုပဲ ဆိုလိုတာပါ. အဲ့လောက်နားလည်ထားတယ်ဆို အင်တာနက်ချိန်မရလို့လုပ်ကြပါဦး.. ဒီဘက်စက်ထဲက ဖိုင် ဟိုဘက်စက်ထဲကူးချင်တာ External HDD မရှိလို့ စတဲ့ ဒုက္ခတွေကတော့ အတိုင်းအတာတခုအထိ ကင်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်…
အပေါ်မှာ ပြောထားတာတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပေါ်မူတည်ပြီး လေ့လာရမယ့်ဟာတွေကို သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်က ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီက အကြံဉာဏ်ယူပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာနဲ့ ဘယ်ဟာက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်..